Axmed Madoobe oo Awaamiir adag dul dhigey Culimada & Waxgaradka. |
Axmed Madoobe oo Awaamiir adag dul dhigey Culimada & Waxgaradka.
Axmed Madoobe oo ah hogaamiyaha KMG Jubba ayaa Amar ku bixiyay in Ciiddamadda Ammaanka ay fasax u qabaan inay jir dilaan Ruux waliba oo loo aqoonsado inuu marti ku yahay Magaalladda Kismaayo si loo Ogaado waxa uu aaminsan yahay.
Sidoo kale, Axmed Madoobe, ayaa amar ku bixiyay in Culimada iyo Waxgaradka ku sugan Gudaha Kismaayo, loo sameeyo diiwan galin, si aysan uga qeybqaadan qalqal galin Ammaanka Magaaladda waxaan lasoo warinayaa inuu farta ku goday in qalalaasaha ka taagan mudooyinkaani Kismaayo, ay geysanayaan Culimada ku cusub Kismaayo ee ka kala imaaday Gobalada Dalka.
Dhanka kale, Haddalka Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa ka dambeeyay ka gadaal markii uu Madaxtooyada kulamo kala duwan kula qaatay Saraakiisha Ammaanka, wasiiradda iyo Odayaasha, iyadoona halkaasi lagu jeex-jeexay Ammaan darida mudooyinkaani ka taagan Kismaayo.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa iminka la filayaa in Ciiddamadda Ammaanka ay bilaabi doonaan Howlgalo lagu aruurinaayo Culimada iyo Waxgaradka loo aqoonsado inay lid ku yihiin ammaanka Deegaanadda Maamulka uu ka arimiyo.